Nanomboka teny lavidavitra lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Nanomboka teny lavidavitra lalao
Fotoana izao ho fizahan-toetra ny fahaizanao mihazakazaka zavatra izy. Raha toa ianao ka maka kilasy fenitra fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny mandroaka ny projectiles haka vinavina ho an'ny vokany, ny lalao an-tserasera mihazakazaka eo amin'ny isan-karazany nanolo-tena milalao ho maimaim-poana, ary koa ny fitaovana hanao manipy basy, miankohoka, pitifirana. Fa raha avy eo hametraka ny fanombanana dia tsy, ianao dia ho liana mba hampiseho ny vokatra tsara indrindra, satria ho azy mahazo hevitra. Rehefa mifehy ny totozy, mihazona ny fanalahidy mandra-hery fisotroana tonga ny ambony indrindra, fa ny manodidina ny fiaramanidina koa tsy mba manadino.
Lalao Manomboka amin'ny lavitra tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Nanomboka teny lavidavitra lalao
Angry Birds: Apetraho maitso kisoa
Small mpitaingina azy
Vonjeo ny Emoticons
Niakatra ho any an-danitra
Manidina squirrel - 2
Sovietika Rocket Zirafy
Road ny fahafatesana
Mianara Fly 3
Mianara Fly 2
Ninja toerana nipoiran'ireo
Eny amin'ny habakabaka 2
Mindy sy ny Monster
Balafomanga Panda: Letayushee Cookies
Flying fiara goblin
Slingshot manohitra milina
Angry Birds vs. pitipoà
Phineas sy Ferb. Hit Perry
Daroka baomba 2
Cannon Angry Birds 3 Fa andron'ny mpifankatia
Fitaovam-piadiana zozoro 2
Angry Birds: ny fipoahana ny kisoa
Equestria. Tsy ampy ny asa
Angry gana baomba 4
Kisoa foana fiarovana
Games Mpanjaka 2
Multi fiara mifono vy
Masha sy ny bera: Andao manidina
Saribakoly sy ny basy
Shooting Krismasy 2
Angry vorona. Mumps Masina 2013.
Farany Nanomboka teny lavidavitra lalao
Mr. Mpitondra hafatra 2
Cartapult vita amin'ny fingotra Burnin '
Tavoahangy fisamborana Apple & tongolo
Mitifitra ny sokatra
Tselatra ny lalao rehetra mihazakazaka eo amin'ny isan-karazany dia mifandray amin'ny iray na fomba hafa na inona na inona hiala hanipy - izany no tena antony ny fandefasana ny lalao isan-karazany
Lalao Online Rehetra Nanomboka teny lavidavitra lalao
Flash lalao mihazakazaka eo amin'ny isan-karazany ny – fialam-boly miaraka amin'ny singa fizika
Free-tserasera ny lalao mihazakazaka teny lavidavitra mijery mora, ary tsy misy olana eo amin'ny fianarana ny fitsipika sy ny fanaraha-maso fomba. Fa iray amin'ireo singa mahafinaritra ny gameplay, satria ho fantatrao indraindray mandra-manana perehochetsya fepetra milalao. Eto ianao dia afaka mampandeha misy mahafinaritra ary niaraka tamin'izay dia naka ny fanaovana asa.
Games ao amin'io faritra io dia azo lazaina fa ny lojika hihaino azy, fanehoan-kevitra haingana, marina, ary na dia shooter amin'ny lafiny sasany. Rehetra mila manao – Takelaky ny zavatra na ny velona na dia nanana ny tanjona, fa eny an-dalana mba hanamafy ny miaraka asa, ohatra, hanangona rakitry ny ela nihantona tao amin'ny rivotra, hampidina ny zavatra ho mihazakazaka ny rafitra mba ho any amin'ny ambaratonga manaraka.
hita maso ny ankamaroan'ny mizana, mampiseho ny mitsingevana haavon'ny hery na ny zoro ny sidina. Mifantoka amin'ny izany, araraoty ilay fotoana tsara, ary tsindrio ny bokotra. Ary dia mila fahaiza-manao sy ny fanehoan-kevitra tsara mba hahazoana ny vokatra irina.
Inona no tianareo
ny fomba akaiky
sy ny famolavolana rafitra tsirairay dia nilalao amin'ny lohahevitra isan-karazany ny lalao tselatra mihazakazaka eo amin'ny isan-karazany. Mahery fo deftly Nampiasa ny tolo-kevitra milina mba handefa ny na lavitra zavatra.
Fampiharana hery mitora
indrindra toy ny manao Yeti, izay efa lasa rafitra azy manokana ny fampiofanana fanatanjahan-tena fitsipika. Ny tena zavatra dia ny hanomboka ny Penguins – ireny no mamely ny ramanavy, tosses amin'ny savily, na marina Niantoraka-tanana vaingan-dranomandry lehibe, ary avy eo dia mamaritra ny dian'i miainga.
Bart Simpson dia tsy saro-kenatra ny haneho ny fanajana ny ray aman-dreniny, ary manome ny boriky nihazakazaka Homer mba ao amin'ny malalaka lehilahy. Misy ohatra manaitra ny fandefasana amin'ny lalao isan-karazany no Angry Birds, izay mampiasa tsirairay toy ny projectile mba handrava ny fahavalo ny trano – kisoa. Tsirairay dia samy manana toetra sasany, mamela ny hiatrika rafitra matanjaka indrindra.
Lalao snowballs koa no tenin'ny sokajy eo amin'ny isan-karazany. Ekipa roa nandray fandosirana ho amin'ny fananganana ny rindrina sy Meta ny projectiles ho ny fahavalo toby. Tanjona tsara sy mifidy ny lalana fa ny oram-panala efa tonga eo amin'ny tanjona.
Nandritra ny ady ho amin'ny trano mimanda ny fitaovana dia ho manipy catapult sy ny tafondro. Ireo baomba dia hanampy mba handrava ny alalan 'ny fiarovana hampahery sy handresy. Dia notoraham ny fahavalo amin'ny vainafo mirehitra, cores sy lo voatabia.
Mr. Bean antoka ao ambadiky ny balafomanga, ka nanapa-kevitra ny manidina. Izany dia mampahatsiahy ny mahery fo iray hafa – Gana Daffy gana, izay nampiasa imbetsaka izany karazana andrana sy ny mirehitra nipoiran'io fitroarana ao ambadika. Izany ihany koa ny mahay mampiasa matetika coyote Willie, ary izy tsy matahotra ny tsy fahombiazana matetika.
Mihazakazaha isan-karazany, dia toy izany no hamela anao handresy toerana, anefa tsy lasa manidina avo loatra. Na, iza no mahalala ... Raiso nanaovany bala afomanga, nanangona azy io amin'ny an-tsipiriany. Form singa mety ho any, na dia mampihomehy – tsipìka ny sambo ny faneva fa tsy afaka ny ho eo amin'ny endrika na ny endriky ny vavany ny olombelona orona. Anao Ireto: tonga ny salohim-bary, ary ny sasany mety handraisana bays omby ny biby. Mariho fa toy izany ny lanjany sy mamolavola ny zanakao dia tsy hiala na dia ny eto an-tany ny atmosfera. No tianao ho any ambony? Dia hanova ny singa ny bala afomanga mandra-pahatonganao aerodynamics tsara vatana.
Manana fahafahana maro hihazakazaka amin'ny isan-karazany ny biby sy ny zavatra. Ity proteinina, swinging amin'ny sampana, manipy popcorn, filokana vahiny sy fanatanjahan-tena sasany, toy ny baseball baolina kitra, volley.